Cunitaanka Qaadka, Cabitaanka Sigaarka iyo Khamrigu Waxa ay Wax Yeelo u Gaystaan ilmaha Caloosha ku jira *Uur-Jiif-ka* | WWW.SOMALILAND.NO
Posted on Juunyo 22, 2008 by weriye1
Waalid kastiba waxa uu jecelyahay in uu dhalo caruur caafimaad qabta. Waxa kale oo ay jecelyihiin in caruurtoodu ay ku noolaadaan caafimaad wanaagsan. Caruurta oo hesha caafimaad joogta ah, waxa ay qayb weyn ka qaata caanaha naaska hooyada oo loogu dadaalo inta ay yaryihiin.
« Ciidamo gaadhaya 300 oo askari oo kasoo galaya Puntland oo hadda ku sugan magaalada Laascaanood Ogeysiis muhiim ah. Shirweyne Xisbi Qaranka Kulmiye, Laanta Norway, 29.Jun.2008 »